Doorashada Jubbaland waa mid sharci darro ah oo shacabka lagu qaldayo – STAR FM SOMALIA
Doorashada Jubbaland waa mid sharci darro ah oo shacabka lagu qaldayo
Mr Jeesow ayaa sheegay in doorashada aysan ka dhaceyn illaa la helo Baarlamaan soo xulo odayaasha dhaqanka ee degan gobollada Jubooyinka, waxaana uu difaacay go’aankii horay Baarlamaanka Federaalka uu ku diiday dhismaha Baarlamaanka Jubba.
“Baarlamaanka Soomaaliyeed waa uu ka soo horjeedaa doorashada Jubbaland, waxaan leenahay doorasho ma ka dhici karto Jubba, illaa Baarlamaan si xaq iyo xor loo soo xulo oo ay ka qeyb qaataan odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada deegaanadaas ka soo jeeda”ayuu yiri Dahir Amiin Jeesow.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dastuurka qodobkiisa 49aad uu dhigayo in gobolada isku biiraya ay noqdaan kuwo xor ah, isagoo xusay in Gobolka Jubbada Dhexe aanu xor aheyn, sidaas darteed aanay doorasho dhici karin.
Xildhibaan Jeesow ayaa uga digay Ciidamada Kenya iyo kuwa Itoobiya ee ku sugan Jubbooyinka iyo Gedo inay xadgudub u geystaan siyaasiyiinta gobolladaas ka soo jeedaan, isagoo xusay in xubno dhowr ah ay xireen.
“Qof muwaadin Soomaaliyeed ah waliba heer gobal Mas’uul ka ah in la xiro cidna ugama heebeysanayno, ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa safka hore Itoobiya iyo Kenya waxaan leeyahay ha iska ilaaliyaan waajibaadka ay ku joogaan, ma ahan in ay dad xir-xiraan, Kaliil iyo Sayid ma waxa ay dhihi rabaan waa Shabaab, sharciga ay meesha ku joogaan ma ahan in ay dadka xir-xiraan ama maamullo ay dhisaan” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Maalinta berri ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Maamulka Jubba, waxaana u taagan afar musharax oo uu ku jiro Axmed Madoobe.
Dowladda Somalia oo sheegtay Dib u howlgelindonto Hotel Curubo ee magaalada muqdisho